ओन्ड बिना कोल्ड हैक केक - Thermomix रेसिपीज ThermoRecines
माछा250 मिनेट4 व्यक्ति150२ क्यालोरी
ओभन बिना चिसो ह्याक केक मेरो एक हो गर्मी व्यंजनहरु मनपर्ने। यसमा धेरै राम्रा चीजहरू छन् जुन यसले कुनै काम दिदैन, यो छिटो छ र यो सँधै भान्छाको घर हो।
मँ अझै पक्का बुझ्दिन कि यस किसिमका रेसिपीहरू यति धेरै कसरी मनपर्न सक्छन तर सत्य यो हो कि मैले यसको रूपमा प्रयोग गरेमा केही फरक पर्दैन। दोस्रो पाठ्यक्रम वा एक खाजाको रूपमा। तथ्य यो हो कि यो सँधै आश्चर्यचकित हुन्छ र म सधैं एक पाहुना बीचमा नुस्खा वितरण गर्छु।
समय मा, म गएको छु मूल विधि लाई अनुकूलन गर्दै को स्वाद र आवश्यकता को लागी सानो परिवार मेरो जस्तै त्यसैले हामी चिसो माछाको केकको मजा लिन सक्दछौं तर बाँकी भागहरू बिना फ्रिजमा दिनको लागि घुमाउँदै।
1 ओन्ड बिना चिसो ह्याक केक
2 के तपाईं ओभर बिना यस चिसो ह्याक केकको बारेमा बढी जान्न चाहनुहुन्छ?
एक धेरै साधारण केक बनाउनको लागि र तपाईं एपिरेटिफको रूपमा वा दोस्रो पाठ्यक्रमको रूपमा प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ।
Bones०० ग्राम पकाइएको ह्याक, हड्डी वा छालाहरू बिना।
खाना पकाउन वाष्पीकरण गरिएको दुध वा क्रीमको g० ग्राम
G० g सुरिमि
२० ग्राम टमाटर सॉस वा केचअप
हामीले पकाएको ह्याकलाई गिलासमा राख्यौं। बाँकी सामग्री र स्वादको लागि मौसम थप्नुहोस्। हामी दौरान मिक्स Seconds सेकेन्ड, गति 30 सबै सामग्रीहरु कुचल्न। हामी मिश्रण ब्लेड तिर कम।
अर्को हामी कार्यक्रम Minutes मिनेट, º ०º, गति 10/ १/२।
जब हामी 500 सीसी क्षमताको मोल्ड तयार गर्दछौं। यदि यो प्लास्टिक, धातु वा गिलासबाट बनेको छ भने हामी त्यसलाई हल्कासँग ग्रीस गर्छौं र पारदर्शी फिल्मले यसलाई कभर गर्दछौं। यदि यो सिलिकॉन छ भने हामीले केहि गर्नुपर्दैन।
समय पछि, हामी मोल्डमा मिश्रण खन्याउँदछौं। हामी यसलाई मोल्डलाई नाजुक रूपमा उठाएर र बिस्तारै छोडिदिन्छौं। सतह महीना गर्नुहोस् र यसलाई कम्तिमा hours घण्टा फ्रिजमा चिसो दिनुहोस्। यद्यपि यसलाई रातारात वा बिहानदेखि राति छोड्नु राम्रो हुन्छ।
सेवाको क्षणमा, हामी यसलाई अनमउन्ड गर्छौं र यसलाई धुईएको, सुकाइएको र काटिएको चाइभ्सको साथ गार्निश गर्दछौं।
हामी टोस्ट रोटीको साथ मेयोनेज, गुलाबी चटनी वा टार्टरको सेवा दिन्छौं।
यो धेरै महत्त्वपूर्ण छ कि ह्याकमा हड्डी वा छाला हुँदैन।
यसको स्वाद बढाउन यसलाई मेयोनेज वा टार्टर सॉसको साथ आवश्यक छ।
के तपाईं ओभर बिना यस चिसो ह्याक केकको बारेमा बढी जान्न चाहनुहुन्छ?
यो गर्न मलाई हेक प्रयोग गर्न मन पर्छ तर यदि तपाईं प्रयोग गर्नुहुन्छ भने यो राम्रो हुन्छ मंकफिस, एक्लो वा कोड।
यो केक को लागी आदर्श हो माछाको फाइदा लिनुहोस् जुन तपाईंले अर्को रेसिपीबाट छोड्नुभयो। राम्रो हाउसकीपिंगको लक्ष्य बचेकाहरूलाई दोस्रो जीवन दिनु र बचत गर्नको लागि केहि पनि फ्याँक्नु हुँदैन।
यदि तपाईंसँग छैन भने पकाएको माछा तपाइँ यसलाई सजिलैसँग Thermomix को साथ पकाउन सक्नुहुन्छ। तपाईले भर्मा र प्रोग्राम १ 18 मिनेट, भेरोमा तापमान र गती १ मा राख्नुपर्नेछ। तपाईं गिलासको फाइदा लिन सक्नुहुनेछ अन्य सिसप र क्रिमजस्ता अन्य व्यंजनहरू पनि तयार पार्न। यद्यपि तपाईं यसलाई गिलासमा मात्र 1०० ग्राम पानी राखेर गर्न सक्नुहुन्छ।
थप जानकारी - ह्याक र साल्मन पाई
अन्य रेसिपीहरू पत्ता लगाउनुहोस्: सामान्य, Years बर्ष भन्दा बढी, माछा, गर्मी रेसिपी
लेखको पूर्ण मार्ग: थर्मोरसेटास » सामान्य » ओन्ड बिना चिसो ह्याक केक
भिक्टोरिया सोलर लोबेल भन्यो
भिक्टोरिया सोलर लोबेललाई जवाफ दिनुहोस्
नुरिया ना भन्यो
धेरै राम्रा तर दुध न पिउने मानिसहरु पिउन सक्दैनन्। धन्यवाद, दूधको विकल्प राख्नु राम्रो हुन्छ
नुरिया नालाई जवाफ दिनुहोस्
यस नुस्खाको लागि तपाइँ कुनै समस्या बिना वेगन क्रीम प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। 😉